Umthengisi weePea kunye neeMbotyi eziThengisayo | Iigusha ezintathu
I-ertyisi kunye ne-Bean Netting kukhutshiwe umnatha we-polyethylene mesh, inkxaso yeembotyi zembaleki, i-ertyisi, i-ertyisi eziswiti kunye nezinye izityalo ezinyukayo-ngeembotyi zembaleki ingakumbi ezixhamla kumnatha xa zigqunywe ngaphezulu kwesakhelo.
Yenziwe nge-PE, umnatha unokubuyisela umnatha wesinyithi, igridi yentsimbi kunye nezinto ezinokutsha. Ihlala ixesha elide, ilula kodwa yomelele kwaye inokusetyenziswa kwakhona ukusuka kwelinye ixesha ukuya kwelilandelayo, kulula ukuyifaka kunye nokumelana nezenzi zangaphandle.
Lo mnatha unceda ukuxhasa izityalo ezintsha ezinyukayo kumanqanaba okuqala okukhula.
Iikona ezine zinokulungiswa, ezilungele ukufakwa, ezinokuphinda zisetyenziswe kwaye ziphinde zisebenze kwakhona.
Ubungakanani obukhulu be-mesh buvumela ukuba ukhule ngokulula izityalo ezintle kwaye uvune yonke imifuno ngaphandle kokuphazamiseka okanye ukubambeka. Ixhasa ii-ertyisi, iitumato, imidiliya kunye nemidumba ..
Suitable Ifaneleke kakhulu kwimidiliya, imifuno, iziqhamo kunye neentyatyambo, ezinje ngeengcambu zelofah, umdiliya, izihlanganisi zediliya, ihoneysuckle, ikhukhamba, njl.
Inombolo yento Ubungakanani Ubungakanani beMesh
I-TGS-PS174 1.7x4m I-120X120MM
I-TGS-PT174 1.7x4m 100x100mm
I-TGS-PT25 kunye noKhuseleko 2x5m
Egqithileyo Ibhabhathane lokusiba
Okulandelayo: Umjelo woGada oGcina